Sat Jirama : mitaky ny hitantanan’ny Jirama ny rano mandritra ny 30 taona | NewsMada
Sat Jirama : mitaky ny hitantanan’ny Jirama ny rano mandritra ny 30 taona
Efa nohavaozina ny hitantanan’ny Jirama ny sehatry ny herinaratra mandritra ny 20 taona. Takin’ny sendikà ny hamoahana ny lalàna manavao ny hitantanan’ity orinasam-panjakana ity ny sehatry ny rano ihany koa.
Nanao fivoriambe tsy ara-potoana ny sendikàn’ny mpiasa mahaleotena ao amin’ny Jirama (Sat), omaly, teny Ambohimanambola. Maromaro ny fanambarany ary anisan’izany ny hanoherana marin-drano ny fisitahan’ny fanjakana amin’ny Jirama, ny fandroahana mpiasa faobe, ny fanovana ny sata mifehy ny orinasa, ny fikitihana ny tombontsoan’ny mpiasa, sns. “Kely ny karaman’ny mpiasan’ny Jirama, ka tsy ekenay ny mbola hampihenana izany sy ny tombontsoa kelin’ny mpiasa”, hoy ny filoha nasionalin’ity sendikà ity, Haja Maminirina.
Takin’ny Sat Jirama koa ny hampiharana ny lalàna mamaritra ny hanavaozana ny fitantanan’ny orinasa Jirama ny sehatry ny rano mandritra ny 30 taona. Nohamafisin’izy ireo indray ny hanovana ny lalàna mifehy ny rano 98-029 sy ny mifehy ny herinaratra 98-032, satria mametra ny Jirama tsy mahazo manao fampiasam-bola hanitarany ny fihariany sy ny sehatra iasany ireo lalàna ireo. Ao anatin’izany ny tsy fahafahany manitatra ny fotodrafitrasa sy ny toerana tokony hamokarany herinaratra sy rano, fa lasan’ny orinasa tsy miankina.
Handray anjara amin’ny fifidianana 2018
Nanamafy ny filoha nasionalin’ny Sat, Haja Maminirina fa tsy manohana olona izy ireo fa manohana foto-kevitra. Noho izany, tinapaka nandritra ity fivoriambe, kongresy tsy ara-potoana, omaly ity, fa handray anjara amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny Sat-Jirama. “Afaka ovaina ny fitsipika anatin’ny fikambanana satria fanapahan-kevitry ny fivoriambe io”, hoy ny filohany Haja Maminirina. Efa voavolavola ny fandaharanasam-piarahamonin’ny Sat Jirama, mikasika izany ary havoaka tsy ho ela.
Voafidy ho sekretera jeneraly vaovaon’ity sendikà ity Randrianarimalala Alain Fidèle, nisolo ny teo aloha, lasa nisotro ronono.